လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် NLD ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ကို အတည်ပြုပြီး မကြာမီရက်ပိုင်း?? - Yangon Media Group
လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် NLD ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ကို အတည်ပြုပြီး မကြာမီရက်ပိုင်း??
NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမျိုးညွှန့်
နေပြည်တော်၊ သြဂုတ်၂၅-လာ မည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် NLD ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ကို အတည်ပြုချက်ရရှိပြီး မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ထုတ်ပြန် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သြဂုတ် ၂၅ ရက် မွန်းလွဲပိုင်း နေပြည်တော် စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ (၂) တွင်ပြု လုပ်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အစည်း အဝေးအပြီးတွင် NLD-CEC ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမျိုး ညွန့်မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
NLD-CEC ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်မှ ”အဓိကက ပါတီတွင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး က တိုင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာ ဆုံးဖြတ် ပေးရတာရှိပါတယ်။ နောက် ကျွန် တော့်ရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တိုင်ကြားစာဌာန အစောင် ၂၀ တင် ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါအတွက် ကျွန် တော်တို့ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့က နောက်ဆုံးအဖြတ် ဖြတ် ပေးပါတယ်။ လာမယ့် ကြားဖြတ် ရေးကောက်ပွဲအတွက် ဗဟိုအောင် နိုင်ရေးအဖွဲ့ကို အတည်ပြုချက် ထုတ်လိုက်ပါပြီ။ ဒါကို မကြာမီရက် ပိုင်းအတွင်းမှာ ထုတ်ပြန်သွားမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းအပြင် ဗဟိုသဘာဝပတ် ၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အ စည်းဖွဲ့စည်းဖို့အတွက် ကျွန်တော် တို့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ နောက် ပြီးတော့ လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့က နေပြီးတော့ အစီရင်ခံစာတင်ပြ တာကို လက်ခံအတည်ပြုပါတယ်။ တိုင်ကြားစာကတော့ အစောင် ၂၀ စစ်ဆေးတင်ပြပါတယ်။ အဲဒီ ထဲမှာ နှစ်ဦးကိုတော့ အရေးယူဖို့ တင်ပြထားပါတယ်။ စည်းကမ်းထိန်း သိမ်းရေးအရ အရေးယူတာတွေ လည်းရှိပါတယ်။ သုံးလေးဦးလောက် ရှိပါတယ်။ မကြာခင်ထွက်လာပါ လိမ့်မယ်။ အဓိကကတော့ ပါတီစည်း ကမ်းမလိုက်နာတာ။ ပါတီရဲ့ပုံရိပ် ကို ထိခိုက်ညှိုးနွှမ်းစေတဲ့လုပ်ဆောင် ချက်တွေရှိတာ။ အဓိကက ဒါတွေ ကျွန်တော်တို့ အထူးသဖြင့် အရေး ယူပါတယ်။ နှုတ်ထွက်ခွင့်ကိစ္စ ဦး ဖေချစ်ကတော့ နှုတ်ထွက်ခွင့် တောင်းထားတာကြာပါပြီ။ ဒါက တော့ နှုတ်ထွက်ခွင့်တောင်းထား ပါတယ်။ ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း၊ ၀ါးခယ် မတိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် က ကျွန်တော်တို့ဆီကို တရားဝင် နှုတ်ထွက်ခွင့်တင်ထားတာမရှိသေး ပါဘူး။ သူက တိုင်းလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကိုပဲ ပြောဆိုထားတာရှိပါ တယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော် တို့က သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးဌေးအောင်က သွားရောက် စည်းရုံးပါတယ်။ လက်ကျန်သက် တမ်းမှာ ပြန်ပြီးဆက်လက်လုပ် ဆောင်ဖို့ စည်းရုံးတဲ့အတွက် ဆက် လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ကျွန် တော်တို့ကို သတင်း ပို့တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့က နှုတ် ထွက်ခွင့်ကို အတည်မပြုသေးပါဘူး။ တိုင် ကြားစာကိစ္စတိုင်ကြားစာက တောက် လျှောက်ဝင်နေတာပဲ။ မနေ့က တစ်နေ့တည်း ၁၀ စောင် လောက် ၀င်တယ်။ အသစ်ဝင်တာတွေကို စိစစ်ပြီးတောက်လျောက် ဗဟိုအ လုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးကို တင်ပြပါတယ်”ဟုလည်း ဆက် လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျပန်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအထိမ်းအမှတ် ဒေါပုံတံတားဖွင့်လှစ် ၊ သီလ၀ါစီးပွားရေးဇုန်နှင့် စက်မှု
”အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်မှုပဲ အရေးကြီးတယ်” ဝေလ
အမေရိကန်နိုင်ငံ မစ္စစ္စပီပြည်နယ် ကိုလံဘတ်စ်မြို့၌ လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်၊ နှစ်ဦးသေဆုံး
ချစ်သူများ နေ့အတွက် စိန်လိုချင်နေတဲ့ ကိုင်လီဂျန်နာ